Chinese Chinese Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
(643 mavhoti, avhareji: 5.00 kubva 5)
People's Republic of China ndeimwe yenyika dzine simba uye dzakabudirira mune zvehupfumi pasi rose, hofori yeindasitiri, parera rekushanya, mune ino nyika yechitatu pakukura pasirese, matunhu ese ebhizinesi, kusanganisira indasitiri yekubhejera. .
MaChinese anozivikanwa nekushingairira kwavo uye nemazvo, asi chimwezve chinhu chevanhu ava chishuwo chemutambo. Kubhejera muChina kwakaonekwa zviuru zvemazana zvakapfuura uye zvakabatana zvakanyanya netsika nenhoroondo yenyika. Hazvishamise kuti vagadziri vane mukurumbira vezvinhu zvemitambo zvine hunyanzvi pakati pezvakaitika, zvinonzi, mitambo ine nyaya dzeAsia, dzinoshandisa zviratidzo uye hunhu hwetsika yekumabvazuva, kusanganisira chiChinese. Uye zvakare, kune akati wandei mitambo yeAsia seimwe nzira kune yakasarudzika tafura uye makadhi mitambo: Sic Bo, Mahjong, Chinese poker (makadhi gumi nematatu), fan-tan, nezvimwe.
VaChinese vanoda kutamba uye vanofara kushandisa nguva yavo mumahino ekutamba casino.
Ndeipi mitemo yekubhejera bhizinesi munharaunda yenyika huru ine vanhu vakawanda vanopfuura 1 vanhu bhiriyoni? Ndeipi mitemo inodzora ichi chikwata?
Rwokutanga rweZimbabwe 10 Chinese Online Online Casino Sites
China yemitemo yekubhejera nenzvimbo dzemitambo
Mukutanga kwezana ramakumi maviri, nzvimbo yekubhejera muChina yaive Shanghai. Kubva ipapo, nguva nehurumende yenyika zvachinja, pakave neshanduko muhuridzi hwenharaunda dzenharaunda dzePRC - uye kusvika parinhasi inzvimbo yemutambo chete panenge paine indasitiri yemitambo yenyika iri guta. yeMacau (yaimbova koloni yePortugal, kubvira 1999 ikava chikamu chePRC, iro guta riri pamahombekombe eSouth China Sea). East Monte Carlo, yechipiri Las Vegas - nekukasira kusadana iyi kona yakajeka yemafaro, apo maChinese vane mukana wekupedza nyota yavo yemutambo, uye vashanyi vanobva kumativi ese epasi vachanakirwa nekugamuchira vaAsia. Iri guta ratove nekakawanda rakakwanisa kuwana Las Vegas maererano nekutendeuka kwebhizimusi rekubhejera.
MuMacau, inoshanda anodarika makumi matatu makasino ane echinyakare desktop nemitambo yemakadhi, michina yekutsikisa. Zvakare muMacau ndiyo yakakura kasino pasirese - Venetian Macau. Muguta zvese zvakarongedzwa nenzira yakanakisa yevashanyi, kune akawanda mahotera nemahotera, maresitorendi nemabhawa, zvitoro nemakirabhu ekutamba anopa akasiyana ezvirongwa zvevaraidzo.
Kubva 2002, nzvimbo yeMacau inobvumirwawo kuzarura makasitori kune vatorwa, izvo zvakakonzera zvakawanda kubva kune varairi vanobva kumativi ose enyika.
Uyewo munharaunda yeChina, zvakanyatsoshanda shanduro dzakasiyana-siyana, Macau neHong Kong vanobvumirwa kubheta pamisasa yebhiza.
Chokwadi chinofadza pamusoro pekushanda kwemari muChina
Tsika muChina, chokwadika, yakasiyana neyeEuropean, uye kune zvimwe zvakasarudzika mukati mayo, kunyangwe mushure mekuuya kwemamwe makasino ekunze (kunyanya eAmerica), mamiriro eruzhinji nemitemo yakaoma muMacau zvanyorovera zvakanyanya. Kazhinji, mushanyi wekhasino anobva kune chero nyika anonzwa kugadzikana. Asi hatifanire kukanganwa nezvemitemo, semuenzaniso, kazhinji nguva dzose zvinofanirwa kutevedzera kodhi yekupfeka, kwete kupokana nevarindi, kutakura chitupa, nekuti vanhu vanopfuura makore gumi nemasere vanobvumirwa mukasino, nezvimwe .
Zvinonakidza kuti muChinese kasino, zvinorambidzwa kutamba vatungamiriri vemuno, uye zvakare haugone kutora makamera uye zvimwe hombe michina. Uye iyo yakasara yemitemo yakajairika yakafanana neiyo inoshanda kutenderera pasirese.
Chimwe chiitiko chinonakidza chebhizimusi rekubhejera kuChina ndiyo kasino inoyerera. Mahoro eGaming ari pazvikepe uye akavhurika kune vese maChinese asingakwanise kushanyira Macau. Vatambi vanokwira ngarava kuHong Kong voenda parwendo rwekusarerekera mvura, uko, pasina kutyora mutemo, vanogona kubheja zvakachengeteka.
Kubatsirwa kwebhizimusi muChina
China inobata chinzvimbo chinotungamira pasirese maererano nepundutso muindasitiri yemitambo, inogara ichikwikwidza nzvimbo imwechete neUnited States. Kunyangwe paine kugara kuchisvetuka mukuita purofiti inosanganisirwa nehurumende kurwisa huwori, kubuda kwevatambi vakuru kubva kuMacau, kwete chishuwo chevakuru vakuru kuwedzera huwandu hwenzvimbo dzemitambo munyika nekunyoresa zviri pamutemo makasino epamhepo, purofiti kubva pakubhejera kuChina makumi emabhiriyoni emadhora gore rega uye inosvika kudarika makumi mashanu muzana emari yemari mubhajeti yenyika.
Zvakare chakakosha chikamu chemari yose kubva kumakambani ekubhejera ndiyo mugove unowanikwa nevakagadzira mitambo yemafoni muChina. Mari inowanikwa yevagadziri yatodarika $ 5.5 bhiriyoni, uye chiratidzo ichi chinogona kuwedzera na2019 kusvika $ 11-12 bhiriyoni.
Uye zvakare, muChina, yakanyanya kuvandudzwa nzira yekubhejera, kunge e-mitambo. Nyika ine chirongwa chehurumende chekuvandudza e-mitambo uye rutsigiro rwevatambi, avo gore rega rega vanotora mibairo mumakundano epasi rose. Kunyangwe paine chokwadi chekuti kutengeswa kwepamutemo kwesoftware ye-e-mitambo kwakarambidzwa, maChina emitambo situdiyo ndivo vanopa zvekuvandudza zviitiko zvemakambani ekunze Kushanda pane chirevo chekuburitsa kunze, maChinese programmes vanowana mari hombe.
Casino yeIndaneti muChina
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti online kubhejera muChina kwakarambidzwa zvakanyanya uye kunenge kwakaparadzwa zvachose. Hurumende yenyika inoomerera kune yakaoma mutemo unorambidza chero online kubhejera. Kune kurwa kunogara kuripo kunyangwe neayo masosi ayo nenzira isina kunangana anopa ruzivo nezve nharaunda dzekutamba.
Ehezve, maChinese ari kushanyira dzakasiyana siyana dzekune dzimwe nyika makasino, avo vanoshanda, vachiziva zvishuwo zvevagari veChinese kubhejera, vanopa masevhisi avo mumutauro wavo. Asi kuChina, zvinoitwa nemasangano akadaro zvinorangwa nemutemo.
Chikonzero chikuru chekuti nzira iyi yekubhejera irege kukura, uye tarisiro yekubuda kwayo kubva mumumvuri haina kukura - uku kushomeka kwezvido zveupfumi zvemunyika mune ino chikamu chebhizinesi. Kana mamiriro acho akachinja, uye mari inowanikwa kubva kumacasinos epasi kuMacau ichakurumidza kudzikira, zvinokwanisika kuti zviremera zveChina zviongorore mafungiro avo pachikamu chepamhepo.
Iyo ramangwana reChina indasitiri yekubhejera
Muna 2015, Macau yakanyora kuderera kwekurekodha muzvibereko mumakore mashoma apfuura. Mazhinji ma roller akakwirira akasiya nzvimbo yemutambo, uye kuwanda kwevatambi vanobva kunze kwenyika kwakadzikira zvakanyanya, nekuda kwekuomesa kwemitemo yekushanyira Macau. Saka, semuenzaniso, mitemo yekuwana mavhiza yachinja, mashandiro evashandisi vejunket ave akaomesesa, nezvimwe. Matanho ehurumende akadaro akamutsa kuratidzira kubva kuvamiriri venzvimbo yemitambo yeMacau.
Asi nyanzvi dzinoti gore rino richava rekupedzisira risingabatsire indasitiri yemitambo yeChinese. Munguva pfupi inotevera mamiriro ezvinhu achadzikama, chirongwa chekurwisa huwori chamira, uye hurumende, iyo inonzwisisa kukosha kweindasitiri ino munyika, ichagadzira mamiriro akasununguka ekuvandudza bhizinesi.
China uye Kubhejera
Munyika maChinese anozivikanwa kunge nyika inoshanda nesimba. Asi kune irino nyika chimwe chimiro chinogona kunzi zvakachengeteka kuda. Urwu ndirwo rudo runoshamisa pakubhejera. Kazhinji maChinese anozviramba ini mufaro wekufadza tsinga dzako, uchibheja mune chero mutambo kana kutenga akati wandei matikiti erotari. MuChina, kubhejera, semuenzaniso, mahjong inogona mune chero chiitiko, kunyangwe isiri iyo zororo.
Saizvozvowo kupindwa muropa muChina kune yakarebesa uye ine nhoroondo nhoroondo, iyo yakachengeta akawanda magwaro anonakidza. Iwo marekodhi ekutanga ekubhejera munyika ino akagadzirwa panguva yekutonga kwedzinza rekutanga, zvinoreva kuti iwo angangoita makore zviuru zvina mazana mana. China yakapa pasi rose kwete chete pfuti, bepa uye zvimwe zvinoshanda zvigadzirwa, asi zvakare zviitiko zvakaita selotari, mahjong kana Pai Gow.
Kubva muzana ramakore rechinomwe AD, kuChina kwemazana emakore akaita masangano mazhinji, akavhura zvivakwa zvekubhejera. Vanhu vakapfuma vanova, dzimba dzekubhejera dzakawedzera. Muzana remakore regumi nemana kusvika gumi nemanomwe, bhizinesi iri raionekwa serinokudzwa uye rakaunza purofiti yakawandisa. Kazhinji yaisanganisira vamiriri venyika yematsotsi vaibatira pamwe nevakuru vakuru vane huwori.
Muchikamu chechipiri chegumi nemapfumbamwe - kutanga kwemazana makumi maviri emakore nzvimbo yekubhejera kuChina yaive Shanghai. Iyo inokwezva vatambi kubva kumakona ese epasi rakakura. Kunyange ipapo, pakanga paine hombe kasino, kwaunogona kubhejera mumitambo mizhinji yemuno neyekunze. Aya masangano aive muFrench Concession yeShanghai, uye Shanghai International Settlement.
Muna 1847, hurumende yePortugal yakanyoreswa kubhejera muMacau. Gare gare, semhedzisiro yehondo yevagari vemuChina yakatonga muhutongi hwechiKomonisiti, hwakagumisa macasino ese munyika, asi kuMacau, iyo ichiri kutonga Portugal, vakaramba vachishanda.
Kana muna 1999, Macao, zvisina kuitika yaive chikamu chePeople's Republic of China, shanduko mumutemo une chekuita nekubhejera. Kubva 2002, pano inobvumidzwa kuvhura makasino evatorwa. Parizvino, pane anopfuura makumi matatu Macau kasino, iyo inopa akawanda emitambo, uye ndiyo yega nzvimbo muChina uko macasino ari epamutemo imba. Muna 2010, Macau yakashanyirwa nevanhu vangangoita makumi maviri neshanu mamirioni, uye inopfuura hafu yavo vaitamba mukasino.
Almost mhiri kweChina irotari yepamutemo muMacao neHong Kong, unogona kubheja pamijaho yemabhiza. MaChinese mazhinji anotumirwa kukufamba kwenguva pfupi muzvikepe, kuti panguva dzezvikepe izvi kunotamba mukasino inoshanda mubhodhi.
Tsika uye sangano
, asi kuti unzwisise chikonzero cherudo rwakadai rweChinese kubheja, hazvina kukwana kutendeukira kunhoroondo. Kudzidzwa kwemubvunzo uyu kunoda kuongororwa kwetsika dzechiChinese. Inofanira kutaura kamwechete kuti hatisi kutaura nezve kukurudzira kwevakuru. Vakakurumbira vevanhu ava havana kubvumidza mutambo wemari, vachifunga kuti kutambisa nguva uye kutyisidzira kurunyararo. Naizvozvo, vatongi vanga vakaomesesa kudzora umambo hukuru, vakagara vachitsvaga kudzora kubhejera uye kunyange ivo kazhinji vairambidza.
Maonero echiChinese ouzivi akaumbwa pasi pesimba reConfucianism, Taoism neBuddha. Mavari yakawanda yekutarisisa inobhadharwa kune masimba emasimba epamusoro. Vatambi vechiChinese kusvika padanho rakakura kupfuura avo vekuMadokero vanotenda mune ramangwana nerombo rakanaka. Kwavari, akakosha akasiyana akasiyana mazango, nzvimbo yezvinhu (rangarira Feng Shui), zuva uye nhamba (iyo inozivikanwa nhamba). Zvese izvi zvinogona kuumba kunyepedzera kwekutonga pamusoro pemamiriro ezvinhu, izvo zvinowanzo kutungamira kubheja kupindwa muropa.
Nenzira, kuvimba nekubhejera munharaunda yechiChinese hakuwanzo kutorwa sehurwere hwepfungwa. Vanhu vakadai vanoonekwa sevakaipa kubva pakuona kwetsika, uye vashoma vanhu vanozovanzwira tsitsi, sezvinojairika munyika dzekuMadokero. Confucius akataura kuti "murume ane hunhu haatambire mari."
Izvo zvakakoshawo kuti utarise nezve zvemagariro zvinhu izvo zvine mhedzisiro pane psychology yevaChinese vanhu. Mumakore achangopfuura, mamirioni avanhu munyika ino vanokunda nzira yakaoma kubva pahurombo kuenda pachinzvimbo chakatsiga, uye kunyange budiriro. Sezvaunoziva, nezuro murombo, uyo akakwanisa kupfuma nekukurumidza, kazhinji anoda kuratidza nyika kuti anogona kukanda mari kurudyi uye kuruboshwe. Ndosaka maChinese mazhinji achiti nhabvu yekutamba ndeyekunakidzwa.
Usakanganwa kuti kusavapo kwemakasino mune dzimwe nzvimbo hazvireve kuti vanhu venzvimbo ino havasi kutamba mari. Semuenzaniso, mahjong inotambwa nemitengo chaiyo munyika ino kwemazana emakore mazhinji. Mutambo uyu unofungidzirwa kuve jimunasiti yakanaka yepfungwa, inobatsira vakwegura, uye varaidzo yakanakisa yemarudzi ese emapati. Mukutamba kwake, kunyangwe pamichato nemariro.
Kunyangwe kubhejera kuMacau kuri kukura nekukurumidza, hurumende yeChinese haitsigire pfungwa yekugadzirisa makasino mune yese nyika. Zvakare, iri kushingaira kuvhara iyo iripo online kasino. Muna 2010, zvakamiswa zviitiko zvezvizhinji zvezvivakwa izvi, uye zviremera zvakabata vanoshanda pakubhejera pamhepo vangangoita zana mamirioni emadhora.
Zvisinei, hurumende haina kumisa uye kutora nzvimbo iyo inopa ruzivo pamusoro pekambani dzekombiyuta uye dzinopa hukama kwavari. Iyi mutemo haisiyi vateveri vechiChinese vevaraidzo yakadai hausi mukana, uye indasitiri iyi yaparadza nyika. Kunyangwe vashandisi vekunze havamhanye nenjodzi yekupa masevhisi kuvagari veChina.
Zvisinei, kubhejera muChina ikoko kubva panguva yekare, uye hazvigoneki kuti mumwe munhu kana chimwe chinhu chingaita kuti vaChina varege chido ichi.
Casinos muChina - uye zvingave zvichidikanwa uye zvakabayiswa
Pane kasino muChina here? Kutaura kazhinji, zvivakwa zvekubhejera ipapo. Asi kutaura zvazviri, ivo vanongoshanda munzvimbo imwechete yekubhejera - Macao. Mune imwe nzvimbo yakakura yenyika inoshanda kurambidzwa kwakazara kwese kwese kubhejera. Zvinoitika sei kuti wechiChinese kubhejera abvisirwe zvido zvake? Verenga!
Nhoroondo yekubheja muChina;
Mitemo nezve kubhejera - kubhejera hakubvumidzwe kwese kunze kwekuMacao;
Macau - mvumo yekubhejera muChina. Anokwikwidza akasimba kunyangwe Las Vegas;
Casinos muChina pamvura kana "inoyerera" kasino;
Casino yeIndaneti muPPRC:
Kugumisa kupi uye chii chaunogona kutamba China?
mahjong uye enda mumigwagwa - iyi mitambo haina kurambidzwa;
makotinati anotenderera, achibuda mumvura isina kwaakarerekera.
Nhoroondo yekubhejera muChina
Ivo vanoti kuda kwevagari vemuMiddle Kingdom pakubhejera kwakabuda kare kare kupfuura mamwe marudzi mazhinji. Kutanga kutaurwa kwaro kwakadzokera kumireniyamu yechipiri BC.
Chinese dzimba dzekubhejera dzakatanga kuvhura pamberi peumwe munhu - kunyangwe muzana ramakore reVII! Kunyangwe maItaly akatanga kuronga kasino chete muzana ramakore reXII, uye vaFrance, uye kunyangwe gare gare.
Nhoroondo yese yeChina yakabatana zvikuru nekubhejera. Ikufuma nyika inova, hupfumi hurinani pahunovandudzika, nzvimbo dzekubhejera dzakavhurika. Asi zvakaitika kuti ivo kazhinji vakave vari pasi pemapapiro emafia, uye vakamuunzira purofiti yakakura.
Kwenguva yakareba, kusvika pakati pezana ramakumi maviri, guta guru renyika yemitambo yekubhejera yaive Shanghai. Pano, nharaunda dzese dzakavakwa kasino. Takashanda hukuru hukuru, takagadzirira kushandira vaenzi zvinehumambo. Vakatamba mitambo yese yakangozivikanwa muAsia, Europe neAmerica.
Imwe kubhejera chitsuwa cheHong Kong. Takatamba pano mumigwagwa, mumatare, munzvimbo dzakasarudzika dzekubhejera uye mumakona ese.
Pamba chaipo pari kubhejera kwakabudirira muMacau, iyo yekutanga kusvika 1999 koloni yechiPutukezi.
Nekudaro, sekuyerera kwemahara kwekubhejera uye makasino, pamwe nekusimbisa masimba emasangano ematsotsi, pakupesana nezvido zvehurumende. Naizvozvo, nekuuya kwesimba revaKomonisiti anenge ese kubhejera kwakarambidzwa.
Mitemo yeChina panyaya yekubhejera
Mutemo unorambidza makasino nekubhejera, wakatorwa muna 1949. Uye achiri kushanda. Chinhu chidiki chinosarudzika chinoitirwa vabhuki. Vanobvumidzwa kubheja pamijaho yemabhiza nenhabvu nhabvu.
Chimwe chakasarudzika irotari. MuChina, vese vari venyika. Vashandisi vega zviitwa zvakadaro zvakarambidzwa zvachose. Mune ino kesi mari inowanikwa kubva kuNational Lottery, inoendeswa kune ekuvaka uye ezvehukama zvirongwa.
Iwe unoti as Macao sei? Hongu. Uku kumwe kusiyanisa kunoratidza mutemo. Kubva nharaunda yayo apo maPutukezi aibvumidzwa makasino, ipapo kudzoka kwenzvimbo kuChina chifuva kwakasarudzwa kusiya, uye kutogadzira nzvimbo ino.
Mitambo yemitemo muChina
Muchokwadi, Macau ndiyo yega nzvimbo yekutamba zviri pamutemo muChina. Chiputukezi chakabvumidza macasino zviri pamutemo muna 1847. Uye maChinese akapa mvumo yepamutemo muna 2002.
Uye sezvo chidimbu chenyika ichi chiri chega nzvimbo kwaunogona kutema makuponi kubva kune vanobhejera, kusanganisira vapfumi vekunze, China rasstaralsya kune mukurumbira. Vazhinji vane husimbe vaishanda pasi pechiPutukezi kubhejera kwakabudirira. Mumakore gumi chete, huwandu hwenzvimbo dzemhando yepamusoro, dzakarova zvese zvinyorwa.
Nhasi Macau inokurumidza kukunda zita reguta guru rekubhejera muLas Vegas. Hafu-miriyoni yeguta inoshanyirwa nemakumi emamirioni evashanyi gore rega. Vokune dzimwe nyika vanogamuchirwa nemaoko maviri uye vanopa 1 1000 uye nenzira isina hanya yekuzadza homwe yenyika.
Asi vagari veChina kusvika kuMacau hazvisi nyore. Izvo zvinodikanwa kuti udzivirire panzvimbo yekutarisa kuGongbei, kuve uine imwe huwandu, uye danho harifanirwe kuve repamutemo. Vakuru kubhejera kunorambidzwa nemutemo, saka havangoiti netsaona kubiridzira mari yeruzhinji.
Makasinos akapinda muChina
Kana maChinese asingakwanise kuenda kuMacau, ivo vanoramba vari imwe sarudzo - kasino inoyerera muHong Kong. Kwete, kwete, izvi hazvitenderwe kutamba padare. Asi mumvura dzekunze, hapana maChinese anovharira asingaite. Uye iripo yakatungamirwa yakaisvonaka manicured liners, iridescent mwenje. Kusiya nzvimbo dzenzvimbo dzeChina, shanyira iyo ngarava inogona kupinda mukubhejera husiku hwese.
Nenzira, inozivikanwa kwazvo pakati penzvimbo dzenhambo pfupi-dzenzendo dzekufamba pazvikepe izvi. Inoitika inoshamisa cruise padhuze nemahombekombe uye kubheja kushambadzira.
Iri bhizinesi nekuda kwemakakatanwa mumutemo ari kusimukira zvakanyanya kubudirira. Ngarava zhinji hadzisi dzakaderera mu "Titanic" yepamusoro. Ivo vari kuwedzera kune yazvino kasino michina haina kunyanya kuipa zvikoro zveMacau, madziva ekushambira, nhandare dzemitambo, maresitorendi, dzimba dzemakonzati, mabhaisikopo nezvimwe.
Kune zvikepe uye zviri nyore, semuenzaniso, barge rakashandurwa. Neroskoshno, asi tikiti yemitambo yehusiku inodhura kubva pamadhora makumi matatu nemasere.
Kasinasi dziri paIndaneti muChina
Zvinotaridza kuti maChinese anogona kusimudzira kuda kwavo kubva kumakasino chaiwo kuenda ku virtual. Asi yakanga isipo. MuChina, pane mitemo yakasimba kwazvo inorambidza zviitiko zvemakasino epamhepo uye chero masosi anopa varaidzo yekubhejera.
Zve kutyora mutemo zvinokanganisa zviito. Iwe haugone chete kubhadhara faindi, asi zvakare kugara mutirongo.
Panharaunda yeChina inorambidzwa kuisa sevha, masystem ekubhadhara, ayo akabatana neinternet kasino mashandiro. hurumende iri kuedzawo nepainogona napo kusefa zviwanikwa zvepasi rose. Kwete chete yakavharidzirwa nzvimbo dzemakasinisiti uye zvitoro zvekubheja, asi zvakare dzimba dze poker, uye kunyangwe zviwanikwa zvinoshambadza imwe yeaya masaiti
Vanoziva mune zvakaoma zvemakomputa vanhu vari kuyedza kudzora kurambidzwa, nemaoko vachichinja IP kuita IP muChina imwe nyika. Asi padanho rino rekudzivirirwa chaiko kweChina rakangwara zvekuti rinoona hunyengeri uhu. Kunyangwe kune yakadaro inoita kunge prank inokwezva kune mhosva yematsotsi.
Nhaurirano: kupi kubhejera kuChina
Kana iwe uchiri kunyatsoda kutamba mune chero yekubhejera, unogona kusarudza chimwe chezvinhu zvacho:
Hazvikodzeri njodzi uye kukurukurirana nekunze kweChinese yemitambo yekutamba, uye kurwisana navo zvakanyanyisa.
0.1 Rwokutanga rweZimbabwe 10 Chinese Online Online Casino Sites
3 China uye Kubhejera
4 Casinos muChina - uye zvingave zvichidikanwa uye zvakabayiswa
4.0.1 Nhoroondo yekubhejera muChina
4.0.2 Mitemo yeChina panyaya yekubhejera
4.1 Mitambo yemitemo muChina
4.1.1 Makasinos akapinda muChina
4.1.2 Kasinasi dziri paIndaneti muChina
4.1.3 Nhaurirano: kupi kubhejera kuChina
inopindirana kasino classical hapana dhipoziti bhonasi